Global Voices teny Malagasy » Tari-Dian’ny GV Raha Hitsidika An’i Taipei, Taiwan · Global Voices teny Malagasy » Print
Tari-Dian'ny GV Raha Hitsidika An'i Taipei, Taiwan
Voadika ny 22 Marsa 2018 4:11 GMT 1	 · Mpanoratra I-Fan Lin Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Mediam-bahoaka, Tsidika, Blaogim-Piarahamonina GV
Sary avy amin'i I-Fan Lin, nahazoana alalana
Ity manaraka ity no lahatsoratra voalohany amin'ny andian-dahatsoratra vaovao hatombotsika ato amin'ny Blog Community izay ao anatin'ny tetikasa GV LIFEstyles. Fahafahana ho an'ny mpikambana ato amin'ny fiarahamonim-pirenena GV mba hizara hevitra sy toro-hevitra momba ny tanindrazany na tanàna misy azy. Raha mikasa ny hitsidika an'i Taipei ianao, aza misalasala mifandray amin'ny mpanoratra ity lahatsoratra ity raha mila soso-kevitra bebe kokoa, na mety handamina fotoana hiarahana misotro kafe mihitsy aza!
I-Fan Lin no anarako ary monina ao Taipei, Taïwan aho. Ireto ny soso-kevitro:
Toerana tsara tsidihana raha hijery ny fiposahan'ny masoandro / masoandro mody:
Cape Santiago no toerana tsara indrindra hijerena ny fiposahan'ny masoandro ao amin'ny faritra lehibe ao Taipei. Io no faritra atsinanana indrindra ao amin'ny nosy Taiwan, ary ahitana tilikambon-jiro.
Raha hijery ny fodian'ny masoandro, Tamsui no toerana tsara indrindra. Ny fankafizana ny masoandro mody ao Tamsui dia ny mandeha mitsangatsangana eny amoron'ny renirano mandrapahatonganao ao Hobe, toerana fanjonoana (mankany amin'ny Fort San Domingo). Aorian'ny fodian'ny masoandro, fotoana ho an'ny sakafo matsiro ao amin'ny Tamsui Old Street.
Sakafo tsara indrindra ao an-toerana “tokony” andraman'ny mpitsidika:
Bawan. Sary nalain'iy IcyNeko (CC BY 3.0).
Ho an'ireo mpankafy sakafo, tokony anandrana ny ba-wan ianao. Pâty amin'ny hena nandrahoina amin'ny etona ny Ba-wan. Vita amin'ny tavolom-bomanga sy tavolom-bary ny pâty. Rehefa avy nahandroina tamin'ny etona, dia lasa tsy masaka loatra (al dente) sy tantera-pahazavana ampahany ny hoditry ny ba-wan, izay mahatonga ny sakafo mampite-hanandrana.
Ireo vezetariana dia mora mahita sakafo veggie sakafo sy trano fisakafoanana veggie any Taiwan satria betsaka ny mponina vezetarianay aty aminay.
Vezetariana na tsia, raha toa ka manjavozavo aminao dia azonao atao ny manandrana tofu. (Efa nampitandrina anao aho!) Veggie izany matetika.
Toerana tsara indrindra hifaneraserana amin'ny mponina ao an-toerana:
Raha tsy manahirana anao ny be olona, mandehana mitsidika tsena. Ny tsena Dongmen no safidy tsara alohan'ny mitataovovonana, ary ao amin'ny Ningxia Road ny tsena hariva tahaka izany.
Raha mitady toerana mangina ahafahanao mifangaro amin'ny mponina ao an-toerana ianao, dia andramo ny Trano Fivarotam-boky Eslite ao Xinyi, izay misokatra hatramin'ny misasakalina. Safidy iray hafa ny mankafy misotro dité miaraka amin'ny mponina ao amin'ny trano fisotroana dite. Wisteria Tea House no safidy tsara ao afovoan-tanàna, saingy ao Maokong ihany no ahitanao trano fisotroana dité 24 ora miaraka amin'ny tazana mahafinaritra amin'ny alina.
Toerana tsara indrindra miaraka amin'ny tontolo voajanahary:
Valan-javaboaharim-pirenena Yangmingshan. Mora idirana ao an-tanàna amin'ny alalan'ny fitateram-bahoaka ny vala, ary maro ny dia an-tongotra. Ankoatra ny ala sy ny rian-drano, afaka mahita volkano sy loharano mafana ao ihany koa ianao.
Sary avy amin'i I-Fan Lin, nahazoana alalana.
Fotoana tsara indrindra hanaovana ny fitsidihana:
Lohataona (Martsa hatramin'ny Jiona) Mihitsan-dravina (Oktobra hatramin'ny Novambra)
Toerana tsara hijerena zava-kanto an-dalambe:
Ximending, indrindra manodidina ny Vala Sinemà Taipei.
Toerana tsara hahatsapana ny tantaran'ny tanàna:
Longshan Temple is a good choice to see the old Taipei. It was built in 1738, and it is still a very popular temple. Nearby Bopiliao also represents the settlement started more than 200 years ago.
Ny Tempolin'i Longshan no safidy tsara hijerena an'i Taipei fahiny. Niorina tamin'ny taona 1738, mbola tempoly tena malaza izy. Bopiliao eo akaiky ihany koa dia mampiseho ny fanorenana nanomboka 200 taona mahery izay.
Amin'ny lafiny iray, ny 228 Memorial Peace Park dia afaka milaza aminao ny tantara maoderin'i Taiwan amin'ny fomba fohy. Samy naorina tamin'ny vanim-potoana fanjanahantany Japoney ity vala ity sy ny Tranobe Biraon'ny Filoham-pirenena eo akaiky ary ampahany amin'ny Hopitaly Oniversite Nasionaly ao Taiwan. Onjam-peo tany am-boalohany ny Mozea 228 Memorial ao amin'ny vala, nanampy tamin'ny fanohanana sivily tamin'ny tranga 228, izay nanaovan'ny Kuomintang avy any Shina famoretana an'ireo mpanao fihetsiketsehana Taiwaney. Ankoatra izany, iray amin'ireo toera-pivorian'ny pelaka ao an-tanàna nandritra ny am-polo taona ity valan-javaboary ity, ary nolokoina loko avana ny vavahadin'ity valan-javaboary ity mba hanehoana ny fanohanana ny hetsika LGBT.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/22/116614/